Fahalalahàna miteny · Avrily, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Avrily, 2008
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Avrily, 2008
Angôla : Ny fahafaham-panehoankevitra sy ny fanatontoloana
Angola 23 Avrily 2008
Kianda no manapariaka ny heviny momba ny fahafaham-panehoankevitra sy ny fanatontoloana : que o facto de alguém não ter nascido num País não lhe deve retirar o direito a opinar, criticar, eventualmente até votar ou mesmo governar … estamos numa era de globalismo, de um mundo com cada vez menos...
Fanoherana 22 Avrily 2008
Fivavahana 17 Avrily 2008
Ezipta: 631 no voatazona ao Mahalla
Ejipta 16 Avrily 2008
Ibn Al Dunya, avy any Ezipta, no milaza fa mihoatra ny 600 no nosamborina tany Mahalla noho ny fitokonambe tamin'ny 6 avrily teo sy ny fiantraikany. Anisan'ny voasambotra amin'izany ny mpamaham-bolongana, ny mpanao gazety ary ny mpanao politika.
Shina: Ny fiantraikan'ny fihetsiketseham-panafahana an'i Tibet
Shina 16 Avrily 2008
Nampangotrangotraka ny fihetseham-pom-pitiavan-tanindrazana shinoa fatratra ny filaharam-panoherana ny shinoa tamin'iny herinandro lasa iny. Hany ka raha nisy zatovovavy mpianatra any etazonia “tratra” nandray anjara tamin'ny fihetsiketseham-panafahana an'i Tibet dia anjatony ny mpiserasera nanompa azy araka izy any an'eritreriny any.
Egypta:Ny tantaran'i Sounilla
Fanoherana 14 Avrily 2008
Zava-bitika ihany no mba hain’i Sounilla, mpianatra Amerikanina, hoe anaty inona ary izy izany no mizotra raha nahita mpianatra roa avy amin’ny anjerimanontolo misy azy nijoro teo afovoan’ny Cairo Square izy ary nanapa-kevitra ny handeha ho eny amin’izy ireo ka ny fakantsariny dia tsy miala any amin’ireo. Tsy hay hoe...
Sri Lanka: Atsaharo ny fanenjehana mpanao gazety
Sri Lanka 12 Avrily 2008
International Federation of Journalists (IFJ) Federasiona Iraisam-pirenen’ny Mpanao gazety, fikambanana iray milofo amin’ny fiarovana sy fanamafisana ny zo sy fahalalahan’ny mpanao gazety dia miantso mba hanaovana ny 10 Aprily ho Andro Iraisam-be, ampitondraina ny teny faneva hoe “Atsaharo ny fanenjehana ny Mpanao gazety eto Sri Lanka“. IFJ dia miantso ireo...